Bilaogera: matihanina amin'ny ho avy. Anisan'ireo maro hafa! | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | | maro
Bilaogera: matihanina amin'ny ho avy
Tamin'ny 1996, ny mpandraharaha amerikanina, Bill Gates, mpiara-manorina ny Microsoft multinational Microsoft, dia naminavina fa "ny ankamaroan'ny vola tena izy dia ho azo amin'ny Internet". Ary 20 taona mahery aty aoriana dia tsy misy afaka mandà raha tsy izany. Na dia marina aza fa ny indostria mpamokatra fidiram-bola lehibe indrindra eto an-tany dia matetika no heverina ho mifandray amin'ny ady, firaisana ara-nofo sy zava-mahadomelina, marina ihany koa fa amin'ny sehatra manokana dia misy endrika vaovao miseho miorina amin'ny Internet, mampiroborobo ny "Freelance" miasa amin'ny olona.
Ary na dia ho an'ny maro aza, na eo amin'ny sehatry ny asa nentim-paharazana (miasa amina fikambanana tsy miankina sy / na tsy miankina) ary amin'ny tontolo tsy miankina mihamitombo sy mahavariana (mahaleo tena sy / na mpandraharaha) dia matetika tsy safidy manaitra ny asan'ny fitorahana bilaogy, izany hoe ny asa famoronana amin'ny fifandraisana, fahalalana na fianarana ampianarina, mamorona lanja fanampiny amin'ny alàlan'ny fahalalana, Ny marina dia izy io dia iray amin'ireo asa tsara indrindra, manankarena ary mahasoa (amin'ny tranga maro aza) amin'ny Internet sy amin'ny tontolo tsy miankina.
2.1 Fanavaozana ny paradigma amin'ny asa
2.2 Asa momba ny ho avy
2.3 ny mpamaham-bolongana
Amin'izao fotoana izao dia azontsika atao ny manonona etsy andaniny ny mpanorina ny Facebook, Mark Zuckerberg, izay mitazona izany: "Mamorona asa ny Internet sy ny teknolojia vaovao" ary milaza fa: "Ho an'ny olona 10 miditra amin'ny Internet dia misy asa noforonina ary ny olona iray dia esorina amin'ny fahantrana".
Etsy ankilany, azontsika atao ny manonona an'i Klaus Schwab, filohan'ny World Economic Forum, ao amin'ny Davos 2016, izay nilaza fa: "Ny revolisiona indostrialy fahaefatra tarihan'ny teknolojia vaovao dia mety hitarika ho amin'ny famotehana asa fito tapitrisa eo ho eo ao anatin'ny dimy taona ho avy".
Na izany aza, tao amin'ny tatitra farany an'ny Forum dia nampiana ho mpifanaraka aminy ny vinavina manaraka: "Asa roa tapitrisa eo ho eo no mety hiteraka, indrindra eo amin'ireo matihanina amin'ny sehatry ny siansa informatika, ny maritrano, ny injeniera na ny matematika."
Ny mitondra sy mitaona an'izao tontolo izao dia tsy milina fa hevitra. Victor Hugo, Poeta frantsay, mpanoratra tantara an-tsehatra ary mpanoratra tantara. (1802-1885).
Izay, nampidirina tamin'ny fanambarana maro hafa sy ny zava-misy marina eo amin'ny sehatry ny asa, dia manazava amintsika ny halehiben'ny fiantraikan'ny fanodinana, fanaovana nomerika ary (r) fivoarana amin'ny ankapobeny amin'ny fomba fiasa, izay tsy vao haingana, ary tsy takona koa izany., ary izay misy hevitra tsy mitovy amin'ny tsiro rehetra. Ny hany azo antoka dia ny anio sy izay ho avy amin'ny fotoana manaraka dia tsy hitovy amin'ny fantatsika sy fantatsika.
Fanavaozana ny paradigma amin'ny asa
Tsy ny olona amin'izao fotoana izao ihany no mamorona sy / na mizatra amin'ny endrika vaovao na paradigma amin'ny asa matetika eo ambanin'ny teny filamatr'i "Freelancer". Fa kosa, amin'ny ankapobeny ny "Asa, fikambanana ary olona" dia manomboka mihodina amin'ny karazana sy modely vaovao amin'ny firafitry ny firafitra sy ny asa. Ny fomba fahazoantsika na hahatakarantsika ny asa dia noho izany dia iray amin'ireo fiovana lehibe miseho amin'ny fanovana ankehitriny sy ny ho avy tsy azo antoka.
Ny toetra vaovao ananan'ny «Professional of the Future» dia tokony ahitàna ny fianarana tsy tapaka, ny fahaizana mandinika indray ary mamerina mamorona ny sanganasa, ny fampifanarahana, ny famoronana ary ny fivezivezena saika mitohy., miaraka amin'ny fahaiza-manao tsara kokoa hiara-hiasa amin'ny multidisiplinary, izany hoe, miaraka amin'ireo namana sy manam-pahaizana manjakazaka amin'ny fifehezana hafa.
Ny iray amin'ireo lafiny mivaingana sy manan-kery indrindra amin'ity paradigma asa vaovao ity dia ny fahalemen'ny mpiasa, fivezivezena, ny fampiasana haitao avo lenta, ny fifandraisan-davitra, ny fifandraisan'ny Intelligence artifisialy na ny fanolorana andraikitra ho azy ireo ary ny fandraisana fanapahan-kevitra ho azy ireo, ary ny fampiasana ny Big Data, ny Learning Machine ary ny Blockchain ho an'ny fitantanana azo antoka sy azo itokisana amin'ny fampahalalana marobe.
Noho izany, ny sary tsara indrindra ho an'ny «Paradigma momba ny asa vaovao» amin'ny fotoana ho avy dia mamela antsika hanana toerana «hiaina Ady Talenta» amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena na ny fihetsika. Ary ny iray izay tsy hifaninanana fotsiny isika fa hifaninana amin'ireo endrika teknolojia vaovao (programa, milina, robot, androids). Na dia azo antoka aza fa avy amin'ny fiononan'ny tranontsika na ivelan'ny fikambanana iasantsika.
Ary io fanovana lehibe io dia tsy maintsy manana ny toetoetran'olombelona ho lakilen'ny fahombiazana mihoatra ny hatramin'izay. Ka io dia mitohy ho loharanom-pahalalana manampy amin'ny fanomezana lanja sy maharitra ny Organisation, nefa mandritra izany fotoana izany dia hitaky be kokoa amin'ny Human Resources. Satria mba hanomezana antoka ny hoavin'ny olombelona ho an'ny olombelona dia tsy maintsy mifindra amin'ny Paradigm of Automation (Masinina / Fahombiazana / Fahombiazana) mankany amin'ny toerana misy ny olona no voalohany, fa tsy ny farany, amin'ny rojom-bidin'ny Organisations.
Asa momba ny ho avy
Ny taona vitsy manaraka dia azo inoana fa hangataka ara-dalàna na tsy ara-dalàna ny fanakaramana olona marobe amin'ny asa / asa izay misy famoronana maro sy fifandraisana ara-tsosialy. Satria ireo lafiny ireo dia mazàna no tsy hain'ny teknolojia maoderina, ohatra, ny faharanitan-tsaina.
Noho io antony io matihanina izay manararaotra na manjakazaka amin'ny fampiasana tambajotra sosialy na media sosialy, hamoronana na hizarana votoaty / traikefa / fahalalana dia ho be fangatahana na hanana fotoana lehibe ambanin'ny endrika Freelance (Malalaka = Maimaimpoana ary Lance = Lanza, «Lanza Libre»), izany hoe amin'ny maha Freelancer (Mahaleo tena).
Fahatakarana ny fomba Fahafahana amin'ny hetsika (asa) ataon'ny olona iray tsy miankina na mahaleo tena, mivelatra amin'ny asany na ny varotra, na amin'ireo faritra mety ahazoana tombony bebe kokoa, ary miompana amin'ny antoko fahatelo izay mitaky serivisy manokanaRaha lazaina amin'ny teny hafa dia ny asa izay tanterahin'ireo mpiasa tsy voakarama / ao anaty fikambanana iray, mba hahazoana valiny mitovy na tadiavina kokoa amin'ny alàlan'ny mpiasa maharitra iray.
Ary satria ny Freelance dia endrika iray manolotra tombony lehibe ho an'izay manapa-kevitra ny handray ny dingana ary misafidy asa mahaleo tena, azo fintinina fa ny mpiasa Freelancer dia mpiasa mahaleo tena izay mampiasa ny talentany, ny zavatra niainany na ny asany mba hanatanterahana ny andraikitry ny mpanjifa izay mitaky ny fahaizany.
Ny baiko izay matetika misy tetik'asa na ny faritra misy azy, ary fehezin'ny torolàlana nofaritan'ny mpanjifa. Ny torolàlana izay mety nofaritan'ny mpanjifa tenany mialoha, raha fantany tsara izay ilainy, na ny client sy ny freelancer handray fanapahan-kevitra tsara indrindra amin'ny famolavolana ny asa na ny tetikasa.
Ireo komisiona izay karama ara-toekarena matetika dia nifanarahana teo amin'ny client sy ny freelancer alohan'ny hanombohana ny tetikasa na ny lahasa. Na izany aza, tsy voatery ho vola raikitra ireo, fa kosa ho an'ny fotoana ampanjifaina na ho an'ny habetsaky ny asa tafiditra amin'ilay tetikasa iray manontolo.
Anisan'ireo matihanina manararaotra na manjakazaka amin'ny fampiasana tambajotra sosialy na haino aman-jery sosialy ary mirona kokoa amin'ny hetsika "tsy miankina", matetika no ahitantsika ireo bilaogera sy mpandrindra hafa ary / na mpitantana atiny nomerika., izay mamorona sy mampita fahalalana, ary mifanakalo hevitra momba ireo lohahevitra mifandraika amin'ny mpihaino iray.
Ity asa ity (Blogger) sy ireo hafa mifandraika amin'izany dia hisy dikany bebe kokoa, amin'ny ankapobeny mieritreritra ny "Generation Y" sy ny Arivo Taona ankehitriny, izay tsy manana fahazarana intsony ny mijery ireo fampahalalana sy fampahalalam-baovao misy ankehitriny (Boky, Gazety, Gazety an-tsoratra, radio sy fahitalavitra) toy ny nataon'ny razambentsika na efa nataony.
Na izany aza, misy asa maro hafa miaraka amin'ireo Blogging izay manana ho avy mampanantena, ao anatiny sy ivelan'ny sehatry ny asa tsy miankina ary ny faritra misy ny fitaoman'ireo tambajotra sosialy., ary hiresaka momba ny 20 nampanantena fatratra indrindra atsy ho atsy isika:
Mpamorona atiny nomerika: Professional izay miaina amin'ny famokarana sy fitantanana atiny nomerika sy haino aman-jery amin'ny Internet (Blogger, Vloggers, Influencers, Copywriters, Writers and Digital Journalists).
Mpanamboatra lozisialy: Programmer, Mpamorona ary mpihazona ny rafitra sy ny fampiharana ankehitriny. Fahafahana lehibe indrindra ho an'ireo miasa amin'ny tontolo finday, zava-misy virtoaly ary teknolojia blockchain.
Mpamorona UI / UX: Manam-pahaizana manokana momba ny fandaharanasa manokana amin'ny fampandrosoana, fampiharana ary fanatsarana ny UI (User Interface) sy UX (User Experience Design).
Mpampiasa manokana / Serivisy ho an'ny mpanjifa: Mpanadihady momba ny mpanolo-tsaina sy mpanohana amin'ny fanatratrarana ny fahafaham-po sy fahombiazan'ny mpampiasa / mpanjifa.
Mpanolo-tsaina sary ho an'ny daholobe: Matihanina miaina amin'ny fikarakarana sy fanatsarana ny tena endrik'ilay olona na Organisation, ampahibemaso na tsy miankina.
Mpanolotsaina sary nomerika: Matihanina izay mivelona amin'ny fikarakarana sy fanatsarana ny sary nomerika an'ny olona na fikambanana, ampahibemaso na tsy miankina.
Mpampianatra an-tserasera: Mpampianatra amin'ny fampianarana / fampianarana an-tserasera, tinady ankehitriny.
Mpanazatra matihanina: Ireo matihanina izay manampy ny hafa hivoatra amin'ny sehatra samihafa amin'ny fiainany, indrindra any amin'ny toeram-piasana.
Mpanazatra manokana: Ireo matihanina izay manampy ny hafa hitazona sy manatsara ny endrika ivelany, vatana ary endrika.
Digital Marketing Professional: Professional izay mitantana paikady marketing natao tamin'ny media nomerika an'ny olona na fikambanana.
Mpandinika data lehibe: Matihanina izay mamakafaka ny fampahalalana rehetra avy amin'ny rafitra iray izay mivezivezy amin'ny Internet ary afaka mitaona orinasa / orinasa iray.
Community Administrator: Tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny mpanjifa sy / na ny vondrom-piarahamonin'ny Orinasa Aterineto mba hanangonana hevitra hanatsarana ny orinasa sy ny toerana itovizany amin'ireo olona ireo. Ny asany dia ny fanatsarana ny motera fikarohana (SEO) mba hahitan'ny mpanjifa antsika, ny marketing amin'ny motera fikarohana (SEM), ny automatisation des des marketing (SEA) ary ny fanatsarana ny media sosialy (SMO).
Manampahaizana manokana momba ny fiarovana: Matihanina miandraikitra ny fiantohana (fiarovana sy tsiambaratelo) ny fampahalalana nomerika rehetra an'ny olona, ​​orinasa na andrim-panjakana iray.
Mpanao mari-trano sy injeniera 3D: Matihanina mifandraika amin'ny sehatry ny injeniera, ny maritrano ary ny Urbanism, nozarina amin'ny famolavolana tontolon'ny 3D na fanontana zavatra 3D.
Developable Devices Developer: Matihanina voaofana amin'ny fampivoarana ireo fitaovana teknolojia "azo anaovana" (azo hanaovana), toy ny: solomaso, solomaso, famantaranandro, akanjo, sns.
Manager vaovao: Matihanina afaka mamerina mieritreritra ny rafitra na paikady anatiny sy ivelany an'ny orinasa iray, hanatsarana ny maodelin'ny orinasany.
Talent manager: Matihanina amin'ny sehatry ny Human Talent afaka mamantatra sy miasa am-pahombiazana kokoa amin'ny tanjaka sy ny fahalemen'ny olona, ​​hampiofanana azy ireo ho matihanina tsara kokoa amin'ny asany.
Manam-pahaizana momba ny varotra elektronika: Matihanina miandraikitra fisarika sy hitazomana ireo mpanjifa amin'ny Internet.
Lehiben'ny E-CRM: Matihanina miandraikitra ny Rafitra E-CRM (Mpitantana Fifandraisan'ny mpanjifa ao anaty rahona - Fitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa elektronika). Manam-pahaizana manokana amin'ny fitantanana ireo paikadim-pitokisana samihafa an'ny mpanjifan'ny fikambanana.
Operatoran'ny robot: Ireo matihanina miandraikitra ny fampandehanana ireo karazana robots sosialy sy humanoid izay mbola tsy mizaka tena, izany dia natao hifaneraserana amin'ireo mpanjifan'ny fikambanana iray nefa tokony mbola ampian'ny mpandraharaha iray izy ireo.
Araka ny lazain'i Sebastián Síseles, filoha lefitra iraisam-pirenen'ilay tranonkala Freelancer.com: "Androany mihoatra noho ny taloha, mpanoratra sy mpampita hafatra no mitarika ny fangatahana asa an-tserasera". Nilaza ity mpanatanteraka ity fa:
Misy ny gazety amin'ny taratasy, ary azo antoka fa hitohy izy ireo, saingy ampitaina amin'ny alàlan'ny nomerika ihany koa izy ireo. Midika izany fa mbola ilaina ny mpanoratra sy ny mpampita hafatra hamoronana ny atiny. Noho io antony io, ny mpanoratra atiny no asa nitombo indrindra ary azoko antoka fa hitombo hatrany izany amin'ny taona ho avy amin'ny asa an-tserasera.
Ary arak'ity tranonkala ity ihany, amin'ny taona 2018:
Ny fanoratana akademika koa dia niaina fitomboana lehibe, laharana faha-10 amin'ny sokajy fahaizana ambony. Ankoatr'izay, tao anatin'ny famoronana atiny an-tserasera, ny fanoratana bilaogy dia notadiavina fatratra, niaraka tamin'ny fitomboana 146.6% sy ny fanoratana SEO ho an'ireo orinasa ...
Izany hoe raha olona tena mahay amin'ny zavatra ataonao ianao ary te hitrandraka ny fahaizanao ary hampahafantatra an'izao tontolo izao azy, dingana iray lozika ny hahatongavanao ho Blogger, na amin'ny bilaoginao manokana na an'ny olon-kafa, ary na iza na iza mahalala fa afaka mahazo vola ianao amin'ny alàlan'ny fananganana vola amin'ny bilaoginao manokana na amin'ny famoahana ny volanao amin'ny alàlan'ny bilaogy misy anao. Fahatrarana ny fahombiazanao sy ny fahaleovantenanao ara-bola amin'ny alàlan'ity fomba fiasa amin'ny Internet ity.
Androany, tanora matihanina maro no mitady ny fanatontosany matihanina sy ara-bola amin'ny alàlan'ny endrika asa mahaleo tena na orinasa vaovao. Ary na dia amin'ny ankapobeny aza, ny ankamaroan'izy ireo dia mirona miditra amin'ny tsenan'ny asa hahazoana tontolo iainana mandray sy milamina, tontolon'ny asa izay mifanaraka amin'ny tanjon'izy ireo amin'ny ho avy, misy ny hafa izay ny tanjon'izy ireo dia ny miasa amin'ny zavatra iray izay mahafaly azy ireo fotsiny, tsy mijanona a be amin'ny vola sy tombony.
Ary amin'ity tranga ity, ny asan'ilay bilaogera dia afaka mifanaraka tanteraka amin'ireo fomba fijery 2 ireo. Satria afaka mahaleo tena ianao amin'ny Blog anao manokana hahatratrarana ny fidiram-bolany, na an'ny fikambanana misy Blog, ary tsy voatery ho "mihidy amin'ny toerana iray mandritra ny 8 na 10 ora".
Ity toe-tsaina vaovaon'ny fananana tompon'ny karamanao (orinasa) ity ary ny fampiroboroboana ny fitomboany ary miankina amin'ny tenanao, amin'ny fahaizanao manokana, dia apetraka amin'ny hery bebe kokoa isan'andro amin'ireo matihanina amin'izao fotoana izao izay mihevi-tena ho mpandraharaha ary mampiasa ny fitaovana teknolojia an-dry zareo mba hahatratrarana ny nofinofisin'izy ireo.
Manantena aho fa ny famoahana boky dia ho an'ny besinimaro, ary manentana ny bilaogera efa misy hanohy an'io asa mahafinaritra amin'ny famoronana, fianarana, fampianarana ary fizarana fahalalana sy traikefa io. amin'ny alàlan'ny atiny nomerika amin'ny alàlan'ny sehatra sy haino aman-jery samihafa, imbetsaka amin'ny altruistika ary indraindray amin'ny fomba tambin-karama. Ary manentana ny hafa hanomboka amin'ity tontolon'ny bilaogy mahafinaritra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Bilaogera: matihanina amin'ny ho avy. Anisan'ireo maro hafa!
JVare dia hoy izy:
Toa tena tsara fa ny hitako dia ny famadihana ny asa ho serivisy. Mampiverina antsika amin'ny fotoan'ny mpanompo io amin'ny fanompoana tompo iray izay mifehy tsy ny asany ihany fa ny fiainany koa.
Ny ankamaroan'ny sanganasa voalaza dia mifantoka amin'ny varotra.
Ao anatin'ny vanim-potoana iray izay nivoahan'ny varotra tamin'ny fomba hafa mihitsy izy.
Fa rehefa manerantany ny fifaninanana ary mahery setra ny fahasamihafana eo amin'ny lafiny toekarena, dia tsy misy ilana azy intsony raha tsara raha hitantsika hoe mora kokoa.
Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fanirery no fitaovana ratsy indrindra hanatsarana ny toe-javatra isam-batan'olona sy iraisana.
Valiny amin'i JVare
Sergio S. dia hoy izy:
Nanosika ny kaominisma nanerana ny sarinao aho ry loko. Tena sarotra ve ny mahatakatra fa ny tsena dia ny fanompoana ny hafa amin'ny fomba tsara indrindra sy ny fiampangana an'io serivisy io? Matahotra ny hifaninana ve ianao?
Valiny tamin'i Sergio S
Miarahaba anao Sergio. Tsy azoko hoe ahoana no nahaizanao nampifandray an'io hevitra hoe "Kominisma" io amin'ny famakiana, fa manaja ny hevitrao aho. Afaka manampy anao aho fa raha mitady literatiora momba ny filozofia "The Hacker Movement and the Free Software Movement" izay imbetsaka dia mifandraika amin'ny Hetsika Blogger (Mianara / Ampianaro / Mizarà) amin'ny alàlan'ny Internet maimaim-poana. amin'ny fotoana, eny, na ho an'ny na ho fanoherana, ireo hetsika ireo dia mifandray amin'ireo endrika politika ireo. Raha tsy izany dia tsy azoko ny zavatra hafa nosoratanao tao amin'ny hevitrao ka tsy afaka mamaly momba ny ambiny aho. Na izany na tsy izany, misaotra tamin'ny fampidiranao.
Fomba fijery hajaina, na dia ny manasongadina indrindra aza dia ny manasongadina ny asanay Mpitoraka bilaogy (Karamaina na tsia, mahaleo tena na tsia) ary ny fahafahantsika manohy manome anjara biriky ary ny asantsika dia manohy manome lanja ny vondrom-piarahamonina.
Fijirihana: tsy ny fanaovana zavatra tsara ihany fa ny fisainana zavatra tsara kokoa